ओली सरकारको नयाँ युग, एक दिनमै थोत्रो भएपछी… « Postpati – News For All
ओली सरकारको नयाँ युग, एक दिनमै थोत्रो भएपछी…
पृथीछक बुढा/पोष्टपाटी । `नयाँ´ शब्दले धेरै कुराको झझल्को दिन्छ । २००७ सालतिर नयाँ नेपालको खुबै चर्चा चल्यो भनिन्छ । २०४६ सालमा पनि खुबै चल्यो भनिन्छ । ५२ सालमा चलेको हल्ला चाहिँ यदाकदा सुनेको हुँ । ६२/६३ मा झन के कुरा गर्नु र ! जहाँ पनि नयाँ नेपाल, नयाँ नेपाल । चिया पसलमा पनि नयाँ नेपाल, देउराली र चौतारीहरुमा पनि नयाँ नेपाल । ठुल्ठुला सेमिनारहरुमा पनि नयाँ नेपालकै चर्चा । नयाँ नेपाल भन्दाभन्दै नेपालको नामै `नयाँ नेपाल´ होकि भन्ने लागिसक्यो ।
`नयाँ´को कुरा गर्दा बाबुराम भट्टराईको नयाँ शक्तिको पनि याद आउँछ । आज बिजुलीका पोलहरुमा `नयाँ युगको शुरूवात´ लेखिएको प्रधानमन्त्री केपि शर्मा ओलीको पोष्टर देख्दा करोडौं खर्च गरि नयाँ शक्तिले गरेको बिज्ञापनको याद आउँछ । बस्तुको बिज्ञापन गरिन्छ, बिचार र सिद्धान्तको होइन । आफैले गरेको हल्ला बिज्ञापन हो, स्वतस्फूर्त होइन ।
बिज्ञापनको उद्देश्य के हो ? बिज्ञापन भनेको झुटको खेती हो । आफ्नो बस्तुलाई अरु बस्तुको तुलनामा उत्कृष्ट भएको जिकिर गर्नु नै बिज्ञापनको उद्देश्य हो । जस्तोसुकै खराव चिज भएपनि बिज्ञापन दाताले त्यसको खराव चिजलाई कहिलै देखाउँदैन ।
सरकारको काम जनताको सेवा गर्नु हो । जनताको काम गर्दा करोडौंको बिज्ञापन खर्च गरेर सबै राष्ट्रिय पत्रपत्रिकामा प्रधानमन्त्रीको फोटो सहितको नयाँ युगको शुरूवात लेखिएको पोष्टर छाप्नुको अर्थ बिज्ञापन गरेको होइन ? के ती पत्रपत्रिकाहरुले स्वतस्फूर्त रुपमा एउटै नमुनाको प्रधानमन्त्रीको फोटो छापेका थिए ? के यो नेपाली जनतालाई बबकुफ बनाएको होइन ? बिकास गर्नुपर्छ, जनता आफैले अनुभुति गर्न सक्षम छ । करोडौं खर्च गरेर जनतालाई जबर्जस्ती सुनाउनु र देखाउनु जरुरत छैन ।
प्रधानमन्त्रीले `देशमा सरकारले काम गरेको छ छैन, मजदुरलाई सोध्नुपर्छ´ भन्नू हुन्छ । देशमा सरकारले काम गरेको छ कि छैन भनेर निर्मला पन्तका बाबू आमालाई किन नसोध्ने ? हिजो आमूल परिबर्तनको लागि ज्यान दिएका शहिद, घाइते र बेपत्ता योद्धाका परिवारहरुलाई किन नसोध्ने ?
सरकारले सामाजिक सुरक्षा सम्बन्धी नयाँ अबधारणाले लगभग दस लाख मजदुर लाभान्वित हुने अनुमान गरिएको छ । तर ठूलो सङ्ख्यामा रहेका घरेलु कामदारहरु कसरी समेटिन्छन् भन्ने बारेमा बहस आरम्भ भएकै छैन । नियमित रोजगारी गरिरहेका मजदुरहरुको लागि मात्रै यो सुबिधा पाउने छन् भने रोजगार नहुनेहरुको लागि यो कार्यक्रम कागलाई वेल पाक्यो हर्ष न बिस्मात भने जस्तै हुनेछ । किनभने मुलुक बेरोजगारले भरिएको छ । गर्नु नै छ भने रोजगारी नपाएकाहरुको लागि बेरोजगारी भत्ताको बन्दोबस्त गरिदिएको भए अहिलेको बिज्ञापनलाई सकारात्मक रुपमै लिन सकिन्थ्यो । १५ बर्षमा भुक्तानी दिने भनिएको रकम सरकारले त्यसै दिन खोजेको होइन, मजदुरले जम्मा गरेको रकमको ब्याज हो । यो योजना त बिमा कम्पनिहरुले उहिलै देखि ल्याएका हुन् । यसमा फरक यति मात्रै छ कि हरेक महिना मजदुरको तलवको ११ प्रतिशतमा रोजगारदाताले २० प्रतिशत थपेर ३१ प्रतिशत जम्मा गरिदिन्छ । यसलाई सार्बजनिक गर्न तामझामका साथ करोडौं खर्च गरेर प्रचार गर्नुको जरुरत थिएन । फोटोले बिज्ञापनको काम गरेको छ ।
नयाँ युगको शुरूवात त त्यतिखेर हुनेछ, जतिखेर प्रधानमन्त्री केपि शर्मा ओलीले चुनाव ताका जे जे बोले । दुई बर्षमा रेल ल्याउछु भने रेलको कुरै छैन । हावावाट बिजुली, पाइप लाइनवाट चुलाचुलीमा ग्यास, पानी जहाजका कुरा ।
यहाँसम्म त ठिकै थियो । पोखराको एउटा कार्यक्रममा त खानको लागि जनताले कामै नगरे पनि बिस्तारामै सरकारले भात पुर्याइदिने कसम खाए । जुन दिन प्रधानमन्त्रीको यो कसम पूरा हुन्छ, सोही दिन नेपाल नयाँ युगमा प्रबेश गरिसकेको स्विकार गरिनेछ । होइन भने सरकारले ल्याएको सामाजिक सुरक्षा सम्बन्धी योजना केवल ओलीको नयाँ संस्करणको बोली बाहेक अरु केही हुनेछैन ।
१३ मंसिर २०७५, बिहीबार को दिन प्रकाशित